”Fadlan iga iibiya Inter” – Dalbert oo kooxdiisa wicitaan ku diley! – Gool FM
”Fadlan iga iibiya Inter” – Dalbert oo kooxdiisa wicitaan ku diley!
(Nice) 09 Luulyo 2017 – Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dambeedka Nice ee Dalbert uu aad ugu kulul yahay inuu ku biiro kooxda Inter Milan isagoo har iyo habeen wacid ku diley kooxdiisa si ay u fasaxaan.
Laacibkan 23-jirka ah ayaa waxaa muddo raadinaysa kooxda Nerazzurri, iyadoo Sky Sport Italia uu qorayo in laacibkan reer Brazil uu kolba woco maareeyaha ciyaaraha ee Julien oo uu ka dalbanayo in laga iibiyo Inter.
Roma iyo Arsenal ayaa sidoo kale laacibka doonaya balse wuxuu u muuqdaa mid ay maskaxdiisa gashay kooxda San Siro, iyadoo xal la rajeeynayo fiidkan, maaddaama ay Nice iskugu imanayso tababarkii 1-aad, markaasoo uu kiiskiisa si shakhsi ah u gudbin karo.
Inter ayaa dadabkan ku doonaysa €15m, sida ku qoran La Gazzetta dello Sport.
''Waan ku faraxsanahay inaad dib ugu soo laabtay naadigii aan jeclaa'' - Rooney + Sawirro & muuqaal